men – MM File
အမျိုးသားတွေ သိချင်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်သားတွေအကြောင်း ( ၁၂ ) ချက်
ရှင်းရှင်းပဲပြောရအောင်…လူတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတာပဲမလား ။ အမျိုးသားတွေကလည်း အမြဲတမ်းလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်သားတွေကို စိတ်ဝင်စားနေတာပဲဆိုတော့…အခုအမျိုးသားတွေသိချင်နေတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးထားပါတယ် ။ ၁. လှေကားပြေးတက် ပြေးဆင်းတဲ့အခါ အဆင်မပြေမဖြစ်ဘူးလား ဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်…ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အဆင်မပြေတာမျိုးမရှိပါဘူး ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အောက်ခံအင်္ကျီအနေအထားမကျတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ပြဿနာနဲနဲရှိတယ် ။ ရင်သားကြီးကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ […]
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သဘာဝ ကာမအားတိုးဆေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သဘာဝ ကာမအားတိုးဆေးများ 10. Fugu လို့ ခေါ်တဲ့ ငါးပူတင်းမှာ tetrodotoxin တွေများစွာပါဝင်သလို အဆိပ်လဲ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အဆိပ်အိတ်ကို မထုတ်ပဲ စားမိရင် အဆိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့ ဒီငါးကို အမျိုးသားတော်တော်တော်များများက စားကြပြီး ကာမအားကို တိုးစေတယ်လို့ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ 9. […]
အမျိုးသား အင်္ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
အမျိုးသား အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲလိုလို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားကြိးမားတဲ့ အမျိုးသားတွေက သူတို့ ဇနီးသည်ထက် သူတို့က ပိုမိုပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်အင်္ဂါ ကြီးမားခြင်းအပေါ် ဒီလောက် ခံစားမှုမထားပဲ သူတို့ရဲ့ နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ကြာရှည်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်လောက်သာ အဓိကထား ကြိုက်နှစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးကုမ္မဏီတွေဟာ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး […]
အမျိုးသားတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝ ကြီးဆေးများ
Onion. ကြက်သွန်နီဟာ လိင်အင်္ဂါတောင့်တင်းခိုင်မာမှုနဲ့ သွေးောကာငယ်တွေကို သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေကာ လိင်အင်္ဂါကို ကြီးမားစေပါတယ်။ဗိုက်ထဲ အစာမရှိချိန်မှာ စားမှ ပိုထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Vanilla. သစ်ခွရည်ဟာ လိင်တံကို တောင့်တင်းခိုင်မာကြီးထွားစေပါတယ်။သဘာဝသစ်ခွရည်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ရေခဲမုန့်တွေထွက်ရှိပါတယ်။ Almond. အခွံမာသီးက အစေ့အဆံတွေဟာ ဇင့်ဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး လိင်အင်္ဂါကို ကြီးထွားစေနိုင်ပါတယ်။စားရတာလည်း အရသာရှိသလို လိင်တံသွေးလည်ပတ်မှုနှုန်းကိုလည်း မြင့်မားစေပါတယ်။ Sea-foods. […]
အမျိုးသားများ သုတ်လွှတ် မြန်တဲ့ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းမျာ
အမျိုးသားတွေရဲ့ ပထမပြဿနာဖြစ်တဲ့ ကြာရှည်မစွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ပြီးသွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာဟာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းတခုဖြစ်လာပြီး စီးပွားရေးသမားတွေလက်ချက်နဲ့ တရားမဝင်ဆေးဝါးတွေပါ မှောင်ခိုဈေးကွက်ဝင်လာပါတယ်။ဒါတွေဟာ စိတ်ချရတာမဟုတ်ပဲ ကျန်းမာရေးကို ပျက်စီးစေတဲ့အတွက် ဆရာဝန်များညွှန်ကြားတဲ့ နည်းစနစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ အချက်တွေကိုသာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. အမျိုးသားတွေ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့အခါ မသန်တဲ့ လက်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ဒီလို အသုံးပြုခြင်းက ခက်ခဲပေမယ့် […]
က်ပိုးအလွှတ်မြန်လို့ ရှက်ရွံ့မှုကို ခံစားနေရပါသလား…. ဒါတွေ လုပ်ကြည့်ပါ
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ လင်နဲ့ မယားကြား လိင်မှု ကိစ္စဆိုတာ ရှောင်လွဲလို့ မရသလို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် မျှတတဲ့သုခကိုရရှိနိုင်ဖို့ တကယ်တမ်း လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့…. အများအားဖြင့် ယောကျာ်းဇြစ်သူက သုတ်လွှတ်စောတဲ့ အခါ စိတ်စိုးရိမ်မှု ကြောင့်မြှု ရှက်ရွံမှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် …. hellosayarwon ရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ အချိန်မတိုင်မီ […]